Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola lase-Argentina U-Juan Foyth Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngegama "Juan". I-Juan Foyth Intsha Yethu Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela isizinda somndeni wakhe, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendaba yegama, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumvikeli ophelele. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abacabangela i-Biography kaJuan Foyth eyathandekayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
UJuan Foyth Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Isendlalelo sokuqala nokuphila komndeni
U-Juan Marcos Foyth wazalwa ngosuku luka-12th ngoJanuwari 1998 kubazali bakhe uMnu noMnuz Ariel Foyth eLa Plata, e-Argentina indawo yokuzalwa Juan Sebastian I-Veron.
Uthi bewazi?… Umndeni kaJuan Foyth yiziPolish zase-Argentina ezisho ukuthi ziyizakhamuzi zase-Argentina ezincane Polish okhokho.
Umndeni wakwaFoyth ujoyina eminye imindeni yasePoland eyakha ingxenye encane e-Argentina. Bobabili umama wakhe nobaba bonke banamapasipoti asePoland futhi kubikwa ukuthi izizukulwane zakhe ezedlule zafika e-Argentina phakathi kwe-1919 ne-1976.
UJuan wakhulela emndenini enezingane zero. Kwakunguye yena kuphela, umama wakhe, ubaba kanye nezihlobo. Akakaze abe nokulingana kokungaba nomzalwane noma udadewabo. Njengomfana omncane, uJuan wayethandana kakhulu nababelethi bakhe ikakhulukazi umama wakhe.
Ngokungafani nezingane eziningi ezingabodwa, tlapha kwakungekho amathoyizi noma imidlalo lapho uJuan esencane. Konke ayekufuna kwakungumdlalo webhola njengesipho esivela kubazali bakhe. Lokhu kwasiza ukusetha umkhumbi ohambweni oluhamba phambili lwebhola empilweni yakhe.
UJuan Foyth Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi Wokuqala Wokuqala
UJuan Foyth wakhulela hhayi nje kuphela ukuthi ufuna ukudlala ku-Premier League kodwa ehlonipha Rio Ferdinand obona ukuthi uyisithombe sakhe sokuqala sebhola. Uthando lwaseRio Ferdinand lwadluliselwa "Isiteshi sokudlala"Ayekuthandayo kuze kube yilolu suku. Ekhuluma ngoRio Ferdinand futhi PlayStation. UJuan wabuye wathi;
"Ngidlala i-Playstation futhi uma ngidlala nabangane ngingathi 'NginguRio Ferdinand'
UJuan Foyth Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Uthando lukaJuan Foyth lomdlalo lwamvumela ukuba angene ebangeni leqembu lesikhathi esisha okuthiwa u-Estudiantes owayeneqhawe lakubo kanye nowayengumdlali weManchester United, UJuan Sebastián Verón njengomongameli weqembu.
Ngenkathi eqenjini, wayenengelosi yomlindi, umqeqeshi osemusha owayemnakekela njengendodana yakhe.
Ekuqaleni, uJuan Foyth wadlala ekuqaleni njengomdlali ohlasela. Lesi yisikhathi esashintsha ngayo izibonelo ngokuthatha URicardo Kaka njengesithombe sakhe. Noma kunjalo, uthando olungathandeki Rio Ferdinand wamenza kamuva athuthela endaweni yakhe ephakathi yokuzivikela ngaphambi kokuba aphendule i-16. Ngonyaka 2017 wabona uJuan evunyelwe ukudlala ibhola lebhola eliphakeme.
UJuan Foyth Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Izinto zaqala ukuqoqa iqembu eliphezulu lase-Estudiantes ngokushesha nje lapho uJuan Foyth ephumelela khona eqenjini. Amageyimu ayisikhombisa ayedlala eqenjini eliphezulu awaxosha ithimba endaweni yeCopa Libertadores. Ngesikhathi esifanayo, uJuan Foyth wathunyelwa eqenjini lezinsizwa lapho esiza khona ukulandela i-trophy yeqembu.
Ukusebenza okuhle kukaFoyth neqembu eliphezulu lase-Estudiantes kwaholela kubalandeli ukuthi bamqaphele njengenkanyezi ephakama. Wayengumuntu okhululekile ebhola ngebanga elihle lokudlula nokubulala.
Ngisho nama-scouts e-football bamangala ngalokho abakubona kuJuan. Izindaba zezinyane elihle kakhulu ibhola ezinyaweni zakhe, lizolile futhi likhululekile, liqinile, lihle futhi lihlasele lafika eYurophu ngaleso sikhathi.
Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba i-Argentine ehlonishwe kakhulu iqale ukuqaphela abahlola izivakashi bevakashele ikhaya lakhe ukuze baqale izingxoxo nabazali bakhe kanye namalungu omndeni akhethekile futhi okubaluleke kakhulu, i-Veron.
Bekuyi Sebastian Veron ngubani ekugcineni wasebenzisa ukudluliselwa kwakhe ngokunikela ngoJuan Foyth kulokho athi "Ama-Safe Hands"Okusho ngomuntu wakuleli zwe kanye nalowo owayengumlingani wezwe, Mauricio Pochettino.
UJuan Foyth osemusha wajoyina intsha yabadlali abayena; Frenkie de Jong, Kasper Dolgerg, I-Christian Pulisic futhi Ruben Neves okungenzeka ukuthi bayongamela umdlalo ngesikhathi esithile. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
UJuan Foyth Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Yonke i-WAG yebhola lezinyawo ifuna ukubukeka njengonkulunkulukazi bamaGrisi abanobuhle babo abangaba mnandi futhi babakhombise amantombazane abo bebhola. Kodwa-ke, akuyona into ka-Ariana Alonso ogama lakhe elihle elibuyisela ukubukeka kwabo okungabikho.
U-Juan Foyth uhlukile futhi akafani C Ronaldo or Gerard Pique. I-bloom yasekuqaleni isiqinisekisile emhlabeni ukuthi iyindoda ejwayelekile ye-21st ye-century engakaze ilahlekelwe ukubukeka kwentombazane.
U-Ariana uJuan Foyth uchaza ngokuthi "U-Girl Simple" ungumthandi webhasikidi kanye nomfana omkhulu esoka lakhe.
Ngemuva kokubona amaphupho akhe ebhola bephephile, uJuan Foyth wanquma ukwenza isinqumo ngesibindi sokuphakamisa ingane yakhe.
Nakuba kungenzeka ukuthi uthola i-£ 18,000 ngesonto, Nokho, indlela yokuphila kaJuan Foyth eLondon isiqinisekisile ukuthi izimali zingakha ubukeka obuhle futhi zishintshe izinto.
UJuan Foyth Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukukwazi ukuphila komuntu siqu kaJuan Foyth kuzokusiza ukuthi uthole isithombe esiphelele ngaye.
UJuan Foyth ungumuntu othanda ukuphatha isikhathi sakhe futhi unomthwalo wemfanelo kakhulu. Ukusuka ebhola kuze kube sempilo yakhe, uJuan ungumuntu ongakhohlwa ukuthi uvelaphi futhi ngokuqinisekile ukhokhele izinkokhelo zakhe kubangani bakhe ekhaya.
UJuan uyazi ukuthi angalinganisa kanjani impilo yakhe siqu neyomsebenzi. Ngokuvamile, ukhetha ukuchitha isikhathi sakhe nomlawuli we-PlayStation ezandleni zakhe ezingadlali omunye umdlalo kuneFIFA.
Ekhuluma ngababhola bebhola abathanda nomlawuli, ungase ucabange lokho Hector Bellerin bezodlala okuningi kweFIFA. Kungenzeka ukuthi ukutholile okungalungile. UmSpanishi uthanda futhi ukubizwa kweDuty.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu kaJuan Foyth Childhood kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.